Nwoke na-egbu opi igbu ududo, wee gbaa ụlọ ya ọkụ - SANTE PLUS MAG - TELES Relay
Mmadu na-eji ube egbu ududo ma mechapu ulo ya oku - SANTE PLUS MAG
O nwere ike iji ọgwụ ahụhụ mee ka ụmụ anụmanụ ndị a kpochapụ. Ma nwoke ahụ họọrọ iji ọkpọ ọkụ. Ngwaọrụ ọ tụlere dị ka nke kachasị dị irè iji mezuo ebumnuche ya, mana ọ ga - eweta ezigbo ọkụ. Ihe ahụ merenụ chọrọ enyemaka nke ndị ọkụ ọkụ, dị ka Akụkọ Tucson.
Otu nwoke gbara ụlọ ya n’amaghị ama - Isi mmalite: Ngalaba Na-ahụ Maka Ọkụ Tucson
Ọ gbara ụlọ ya n’amaghị ama
Dabere na nkwupụta sitere na Tucson Fire Department na United States, ihe nwere ike ịkpata ihe ahụ metụtara na iji'' ịfụ ụfụ iji kpochapụ eriri wiwi. Iji kwụsị ụmụ obere ihe a, mmadụ gaara ahọrọworị ngwa ọrụ a na nke a, n’enweghị enyo mmetụta ọdachi ga-eme ma emesịa.
A gbara ụlọ ahụ ọkụ - Isi mmalite: Ngalaba Na-ahụ Maka Ọkụ Tucson
Ihe a mere na ụlọ mkpanaka, ebe nwoke ahụ kwuru na ọ họọrọ ọkụ ọkụ ọkụ iji kpochapụ obere ụmụ anụmanụ na-anọ n'okpuru ụlọ ya. Akụkọ kwuru na ọkụ anaghị eru n'ụlọ ndị ọzọ dị nso, mana nwaada nwetụrụ mmerụ ahụ hapụrụ nwa ya na ndị agbataobi ya. Dabere na The Independent, Ejikọtara ndị ọrụ ọkụ ọkụ 23 na ebe ahụ. Ntinye aka nke ga-adịru 11 nkeji iji chịkwaa ọkụ.
Ndị ọrụ ọkụ ọkụ 23 gbakọtara n'ebe ahụ - Isi mmalite: Tucson Fire Department
Okwu a na-adịghị ekewapụrụ iche
Ikwere akụkọ ọzọ ABC News, ihe a merenụ dịpụrụ adịpụ. Na ezi ihe kpatara ya, ọkụ nke kpatara ihe yiri nke a gaara esi na mpaghara ọzọ nke United States. N'ezie, nwoke na-elekọta ụlọ nne na nna ya na-anọghị ya ga-ahọrọkwa ọwa ọkụ iji chụọ ududo.. O mechara gbaa ọkara ụlọ ha ọkụ.
Ndị ọkụ ọgbụgba ahụ gbakọtara n’ebe ahụ. Ha karịrị 25 - Isi mmalite: ABC News
Tokyo 2020: Kedu ihe okirikiri uhie na…
Nwoke ahụ mere “mkpebi na-ezighi ezi iji ọkụ kama igbu ụmụ ahụhụ iji gbuo ududo,” ka Lee Wilding, osote onye na-agbanyụ ọkụ na ngalaba mgbanyụ ọkụ ebe ahụ kwuru. Ya mere, site n'iji ngwá ọrụ a, ire ọkụ nwere ike igbochi ụfọdụ mgbawa na iwu ahụ, ọ kọwara. Obere ọkụ gaara ebido ụzọ na oghere mgbidi. Ikan̄ oro ama ọtọt ke ini edemeikan̄ esịmde ubom. Dị ka Lee Wilding si kwuo, o were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ minit 5 ịkwụsị ọkụ na ihe karịrị ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ 25 na gwongworo abuo gbakoro n’ebe ahu. Escobedo Tony, onye isi ndị ọrụ mgbanyụọ ọkụ na mpaghara ahụ kwuru, sị: “ Anyị anaghị akwado iji ụdị ngwaọrụ a iji tufuo ahụhụ ma ọ bụ ududo. "
A salutary ịdọ aka ná ntị na-echetara anyị mkpa ọ dị mara isi ihe na-ebute ọkụ ụlọ.
Kedu otu esi emeghachi omume ma ọ bụrụ na ọkụ ụlọ adị?
Ga-amarịrị ka ime ka omume gị kwe omume n'ọnọdụ a ma ọ bụrụ na ọkụ agbaa n'ụlọ gị, na-egosi saịtị nke ndị ọkụ ọkụ nke France. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịkpọ ndị ọrụ ọkụ site na ịpị 18 ma ọ bụ 112.
Mgbe ị na-eche ka ha rute, mee ihe ndị a ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụsị ọkụ ahụ ozugbo:
Kpofuo ebe ahụ
Jide n'aka na imechi ọnụ ụzọ ụlọ ahụ yana imechi ụlọ gị mgbe ị hapụsịrị. Nke a ga - eme ka mgbasa nke ọkụ ahụ gbuo oge.
Gbaziri ihe si na ya pụta nke kacha nso ịpụ
Ọ bụrụ na ọkụ etinyere n'ime ụlọ ebe obibi, ọnụ ụlọ na-abụghị nke ị nọ, ma ọ bụ ebe obibi ọzọ, tinye usoro ndị a:
Ebe ọ bụ na ọkụ ọkụ nwere ike ịbanye na paseeji na steepụ, ọ kacha mma ịnọ n'ụlọ gị.
Wet ụzọ mechiri emechi nke ụlọ gị ma jide n'aka jiri akwa dị nro kwunye nchawa.
Si na windo gosi onwe gị nke mere na ndị ọkụ ọkụ nwere ike ịmata gị ozugbo na ọnọdụ ahụ.
Ihe kacha mkpa bụ izere anwụrụ ọkụ, anyị agaghị ekwenye na agụụ iwepụ na-akwụ ụgwọ niile.
Ihe na-akpata ọkụ nwere ike ịdị ọtụtụ ma ekwesịghị ileghara ya anya. Mgbe niile na ndekọ mgbochi, ọ dị mkpa iji kpachara anya iji zere ụfọdụ àgwà ndị nwere ike ịdị ize ndụ. Dị ka ihe atụ, ndị ọkụ ọkụ dọrọ aka na ntị banyere eriri mgbatị enwere ike iji ya mee ihe na-adịghị mma.
Ha na-echeta ihe egwu dị n'ime chaja ekwentị.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/un-homme-util-un-chalumeau-pour-tuer-des-araignees-et-finit-par-mettre-le-feu-a-sa -House /
TELES RELAY 56298 posts 1 comments
Ndị otu Christian Orthodox na-eme ngagharị iwe megide ntinye Eurovision song 'El Diablo' - Video
Site n'ịzụta Distell, Heineken chọrọ ịgbatị akara ukwu Africa ya - Jeune Afrique
Tokyo 2020: Kedu ihe okirikiri uhie na azụ ndị na -egwu mmiri pụtara? ...